Qoraalka Mwi Kibaki Ma Waxaa looga dan leeyahay Siyaasiyiinta Soomaalida, Faarax Macalin Muxuu ka yiri, Ujeedada Hoewlgalka cusub muxuu yahay, Daawo Muuqaalo iyo Warbixin | Newsomali	Home
Monday, January 21st, 2013 | Posted by admin Qoraalka Mwi Kibaki Ma Waxaa looga dan leeyahay Siyaasiyiinta Soomaalida, Faarax Macalin Muxuu ka yiri, Ujeedada Hoewlgalka cusub muxuu yahay, Daawo Muuqaalo iyo Warbixin
Qoraal kasoo baxay Xafiiska Madaxweynaha Kenya Mwi Kibaki ayaa amar lagu siiyey dowlada iyo ciidamada Kenya inay bilaabaan aruurinta ama raafka qaxootiga Soomaalida ah ee ku sugan magaalada Nairobi gaar ahaan Xaafada Islii.
Qoraalkan kasoo baxay Xafiiska Madaxweynaha 16kii bishan Janaayo ayaa lagu sheegay in maanta oo ay ku beegan 21ka Janaayo hawlgalkan la bilaabi doono, iyadoo ciidamada Kenya aruurin doonaan Soomaalida ku sugan xaafadda Islii ee aan sharciga heysan. Hawlgalkan ayaa loogu magacdaray(Relocation of Uran Refugees to Officially Designated Camps) Dib u rarida Qaxootiga Magaalooyinka ku dhaqan oo loo wareejinayo Xeryaha loogu talo galay.
Dadka ayaa la qorsheeyey in la isugu geeyo marka hore Istaadiyumka Thika Municipal Staduim, kadibna gaadiid lagu qaado oo loo raro xerada Qaxootiga ee Dhadhaab. Qorshahan ayaa waxaa si weyn udhaliilay qaar kamid ah Xildhibaanada Soomaalida ah ee ku jira Baarlamaanka Kenya.
Faarax Maalim oo shalay shir jaraa’iid ku qabtay magaalada Nairobi ayaa sheegay in arrintan ay tahay fal cunsurinimo ah isla markaana hay’adaha amaanka Qaarkood ay caado ka dhigteen in ay Soomaalida u bartilmaamsadaan si ay dhaqaale uga sameeyeen, wuxuuna sheegay in ay hay’adaha sirdoonka hawshooda kasoo bixi waayeen oo ay eeda uun dusha ka saaraan dadka Soomaalida ah oo uu sheegay in dhibaato weyn lala damacsan yahay.
Daawo wareysi ay bixiyeen Faarax Maalim iyo Haaruun Maxamed
“..Soomaalidaan Aruurineynaa, waa hadal fool xun Dadka maaha in sidii XAYAWAANKII la yiraaho waanu aruurineynaa, dadka waxaa ku jira dad badan oo si sharci ah Qaxootinimo ku jooga dalka, qaarkoodna Ganacsi baaxadleh ayey ku leeyihiin dalka, waxayna horumar badan ka geysteen dhaqaalaha dalka Kenya….” ayuu yiri Farah Maalim oo kamid ah Xildhibaanka Kenya ahna Guddoomiye kuxigeenka Baarlamaanka.
Doorashooyinka Maarso 2013
Xildhibaanada Soomaalida ee ku jira Baarlamaanka ayaa sheegay in ololahan Soomaalida lagu bartilmaamsanayo uu qeyb ka yahay diyaargarowga Doorashada dalka Kenya oo lagu wado inay dhacdo bisha Maarso ee sanadkan 2013.
Xildhibaanada ayaa sheegay in dowlada ay dooneyso inay Soomaalida ka baacsato magaalooyinka waaweyn si aysan ugu codeyn musharaxiinta Qaarkood.
Haaruun Maxamed Yusuf oo kamid ah siyaasiyiinta shirka Jaraa’iid qabtay ayaa shaki geliyey xili lagu soo beegay hawlgalkan lala beegsanayo Soomaalida. Wuxuuna sheegay in xiligan Baarlamaanka la kala diray isla markaana aysan Xildhibaanada Soomaalida u heli karin fursad inay arrintan uga doodaan Aqalka Baarlamaanka.
Magaalooyinka dalka Kenya gaar ahaan Nairobi iyo Mombasa ayey bilihii lasoo dhaafay ka dhacayeen weeraro aan la aqoon kooxaha ka danbeeya, balse dowlada ay ku eedaysay inay ka danbeeyaan kooxda Al Shabaab, waxaana horey xabsiyada lagu xiray dad badan oo Soomaali ah oo aan iyagu wax danbi ah lagu helin.
Waxaa sidoo kale jiray weeraro lala beegsaday goobaha Ganacsiga iyo Masaajidada Soomaalida oo ay Soomaali badan dhimasho iyo dhaawacyo kasoo gaareen.
Go’aanka kasoo baxay Xafiiska Madaxweynaha Kenya Kibaki ayaa kusoo beegmaya xili dhawr todobaad laga joogo markuu dalka Kenya safarkak u yimid Madaxweynaha Dowlada Federaalka Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa asagu sheegay inay doonayaanin dadka loo soo cesho balse, ay diidan yihiin in si jahwareer ah dadka Qaxootiga Soomaalida ah dib loogu soo cesho.
Qorshaha Kenya hada wado ayaa cabsi weyn ku abuurtay shacabka Soomaalida ah ee ku sugan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo caawa cabsi ku seexanaya, manaca cada hawlgalka balaaran intuu socon doono.
Daawo Banaanbax ka dhan ah Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka dhacay Mareykanka
Nin u dhashay dalka Sweden oo lala xiriirinayo Alshabaab oo loo gacan geliyay dowlada Maraykanka
Boqollaal qof ayaa ka qeyb-qaatay dibadbax lagu taageerayay go’aankii dowladda Maraykanka ay ku aqoonsatay dowladda cusub ee Soomaaliya
Posted by admin on Jan 21 2013. Filed under Wararka.
abwaan: odagaan aal kuliistaha ah waxa uu ku hadlayo ayaan la yaabey walaahi in aan xasan shariif madax weeyne ahaan...
Matan: ACWB, War daarood iyo hawiye waxbo idiinma tarayaan ee eebe ka baqa oo camalkiinna wanaajiya, waxaad ku...
gabar galgaduud: ahoryaa aniga su aal aan qa baare majeerteen iyo ogaadeen iyo dhulbahant mawaxay dhasheen 1991...
Mmcaawale: War reer daaroodoow sidaan miyaa garashadiinii kusoo aruuurtay si kasta oo xaal noqdaba baahi ku heysa...
mire xuseen fandhe: ahahahahah waakan isku xaaray dee adeer kursiga ad ku fadhiso gus hawiye ayaa ku hoos jira iska...
DAAWO Howlgalkii Ciidamada Amisom xalay ilaa iyo saaka ka wadeen Xaafada Madiino ee Magaalada Muqdisho
Xaalada Magaalada Kismaayo oo kacsan iyo Ciidamada Ciidamada Dowladda iyo kuwa Raaskanbooni oo difaac isku galay
HALKAN KA AQRISO KHUDBADII Madaxweyne Xasan Sheekh ka jeediyay xalay Shirkii Madaxda IGAD
Daawo Sawirada Shacab Careysan oo bililiqeysanaya Xarun uu lahaa Xisbiga Faroole.
Guri walba oo ku yaala degmada Wada jir waxaa hortaagan saaka Ciidamo, Yaa la raadinaya?
SAWIRADA:Shirkii IGAD ee Magaalada Adis ababa
Dowlada Soomaaliya oo Muqdisho ku qabaneysa shir lagu dhisayo maamulka Jubaland
Halkan ka aqriso warbixintii Guddiga Xaqiiqo raadinta IGAD ka soo diyaariyan soomaaliya oo maanta la hordhigay Madaxweynayaasha IGAD
Wasiirada arrimaha dibedda IGAD oo ku baaqay Shir Dib u heshiisaneed oo ka dhaca Jubbooyinka iyo la dhiso Maamul KMG ah
Ra’iisal Wasaare Saacid “Dhaqaalaha Somalia kor ayu u kacay ka dib dhaqaale badan “